Abenzi be-Type Type Mobile
Ukukhanya Okushisayo kwe-LEDL500 Hot Lighting Operating Light for Hospital
Ukukhanya okusebenzayo kwe-LED500 kutholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga.
I-LEDL500 ibhekisa ku-Light operating mobile.
I-LEDL620 LED Mobile Lightless Operation Light enentengo yokuncintisana
Ukukhanya kokusebenza kwe-LED620 kutholakala ngezindlela ezintathu, ukufakwa kwesilingi, iselula nodonga.
I-LEDL620 isho ukukhanya kokusebenza kweselula.
I-LEDL700 LED Floor Standing Surgery Light Ngezitifiketi ze-CE
Ukukhanya kokuhlinzwa kwe-LED700 kutholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga.
I-LEDL700 ibhekisela ekukhanyeni kokuhlinzwa kokuma phansi.
Ukukhanya kwe-LEDL730 kwe-AC / DC okungenathunzi okuvela eFektri
Ukukhanya kokuhlinzwa kwe-LED730 kutholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga.
I-LEDL730 isho ukukhanya kokuhlinzwa kokuma.
Ukukhanya kwe-LEDL740 kwe-LED okungenasithunzi okuhamba nge-OT nge-Battery Back-up
Ukukhanya kwe-LED740 OT kuyatholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga.
I-LEDL740 isho ukukhanya okuhambayo kwe-OT.
I-DL500 Lalogen Lamp Yokuhlinzeka Esususwayo Emasondweni
Isibani sokuhlinza esingu-D500 se-halogen sitholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga. I-DL500 ibhekisela ekukhanyeni kokuhlinzwa kwe-halogen yeselula.
I-DL620 Hospital Halogen NOMA Khanyisa Ama-Casters
Isibani sokusebenza se-D620 esibalulekile sisebenza ngezindlela ezintathu, ukufakwa kwesilingi, iselula nodonga olufakiwe.
I-DL620 ibhekisa kusibani sokusebenza esikhanyayo esihamba phambili.